Sapporo, any amin'ny farany avaratry Japon | Vaovao momba ny dia
Sapporo, any amin'ny farany avaratry Japon
Rehefa mahita sarintanin'i Japana mahita firenena nosy iray ianao izay amboarina amin'ny nosy efatra sy faritra lehibe folo: Kanto, Kansai, Hokkaido, Kyushu, Okinawa, Shikoku, Chugoku, Tohoku ary Chubu. Ny kolontsaina japoney dia niroborobo kokoa tany amin'ny manodidina an'i Tokyo sy nianatsimo, namela ny avaratra nanakona sy austere izay nahita fivoarana maharitra hatramin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Indro misy Sapporo, ny tanàna lehibe indrindra fahadimy ao amin'ny firenena ary iray amin'ireo fampandrosoana haingana indrindra hatramin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia olona fito monja no nonina. Fito! Androany dia hafa ny tantara fa miaraka amin'izay dia tsy mandray mpizahatany betsaka izy satria lavitra ireo manintona Japoney malaza indrindra. Mahamenatra, ka raha mieritreritra ny handeha ho any Japon ianao amin'ny taona 2020, amin'ny Lalao Olaimpika dia avelako ianao fampahalalana momba an'i Sapporo sy ny ozidiny.
2 Inona no ho hita sy atao any Sapporo
Hokkaido dia iray amin'ireo nosy japoney efatra ary tsy dia mandroso. Manana ririnina tena mafy izy ary ny fahavaratra dia tsy mafana sy mando toy ny any amin'ny faritra sisa amin'ny firenena. Fa manintona ho an'ireo tia natiora.
Ahoana ny fampifandraisanao an'i Tokyo amin'i Sapporo? Ny haingana indrindra dia ny fiaramanidina ary ny zotra dia mavitrika tokoa ka misy sidina maro isan'ora ampiasain'ny orinasa isan-karazany, ao anatin'izany ny JAL na ANA ary ny Vanilla Air na Jetstar mora vidy ohatra. Amin'ny ankapobeny, mampifandray ny seranam-piaramanidina Haneda amin'ny New Chitose any Sapporo izy ireo ary maharitra 90 minitra fotsiny ny sidina.
Ny sidina iraisana dia mety mitentina 400 euro fa aza matahotra fa afaka mihamora kokoa amin'ny orinasa mora vidy ianao na mividy tapakila manokana JAL / ANA izay toy ny Japan Rail Pass fa ho an'ny fiaramanidina.
Azonao atao Mandehana lamasinina? Raha izy JR Tohoku / Hokkaido Shinkansen (ny lamasinina bala), mampifandray an'i Tokyo amin'i Shin Hakodate ao anatin'ny adiny efatra ary avy eo ianao dia mitaingina fiaran-dalamby lava mankany Sapporo izay maharitra adiny telo sy sasany eo ho eo. Manisa kira 270 euro amin'ny lalana iray ary hiverina ny hafa ary dia adiny valo. Eto dia voasaron'ny Pass Rail Japan. Ary raha mitady zavatra hafa ianao dia afaka mandeha sambo miala ao Nagoya, Sendai ary tanàna hafa.
Ny ferry dia mampifandray ireo seranana eo anelanelan'ny Honshu sy Hokkaido ary amin'ny ankapobeny dia tonga any amin'ny tanàna antsoina hoe Otaru antsasak'adiny avy eo Sapporo na Tomakomai adiny iray na mahery. Raha vao ao an-tanàna dia mora be ny mandeha manodidina satria satria vaovao dia manana endrika tanàna amerikana izy, miaraka amina endrika mahitsizoro sy tsotra. eFA zotra metro telo, fiara fitaterana iray ary bus maro. Amin'ny bisy dia azonao ampiasaina ny JRP.
Inona no ho hita sy atao any Sapporo
Ny zavatra voalohany: ny Fetin'ny lanezy Sapporo. Holazaiko fa ity festival ity fotsiny dia mendrika ny mandeha mankany Sappooro amin'ny ririnina. Maharitra herinandro ny volana febroary ary nankalazaina nanomboka ny taona 50. Androany dia misy toerana telo ao an-tanàna izy ary ho hitanao ireo sary sokitra amin'ny lanezy izay afaka mandrefy 25 metatra ny sakany na 15 metatra ny haavony. Ary hatramin'ny 10 alina dia manana jiro izy ireo ka vao mainka tsara tarehy kokoa ny fomba fijery. Misy sary sokitra, hetsika ary fampisehoana mihoatra ny zato ary 11 euro ny fidirana ary maharitra 24 ora.
Ny faharoa dia ny Tranombakoky ny labiera. Ny japoney dia raiki-pitia tamin'ny labiera ary maro ny marika eo an-toerana saingy tsy isalasalana fa teraka teto Sapporo ny fahatairana. Ny marika ihany, Sappooro, no zokiny indrindra ao amin'ny firenena, nanomboka tamin'ny 1877. Nisokatra tamin'ny taona 87 ny tranombakoka ary afaka mianatra ny tantara ianao, manandrana karazana isan-karazany ary maro hafa. Ny akaiky dia a zaridaina labiera miaraka amin'ny trano fisakafoanana.
Ny faritry ny trano fisotroana, efitrano karaoke, fivarotana, pachinko ary trano fisakafoanana ihany Susukino. Mijanona telo fotsiny avy eo amin'ny Station Sapporo ao amin'ny lalamby ambanin'ny Nanboku ary ny specialty tokony hosedrainao dia ny Yokocho ramen, ny karazana ramen eo an-toerana. Toerana iray hafa mety tsara hanandramana an'ity haitao manokana ity ny Sapporo Ramen Republic, amin'ny rihana faha-10 an'ny ivontoerana fiantsenana Esta. Fiantsonana Sapporo: Misy trano fisakafoanana kely valo.
Raha miresaka momba ny gara dia tsy maintsy lazaina fa voahodidin'ny magazay maro izy io ary efa antitra, na dia manomboka amin'ny 2003 aza ny trano ankehitriny. Tsara ny mitsidika satria misy terrasse eo amin'ny terrasin'ny gara. deck fandinihana, ny T38 (amin'ny rihana faha 38), 160 metatra ambonin'ny tany. Tsara ny fomba fijery ary azonao ampiana azy ireo amin'ny mpandinika ny TV tower avy amin'ny Odori Park. Misokatra amin'ny 38 maraina ka hatramin'ny 10 alina ny T11 ary 720 yen ny vidiny.
El Odori Park Izy io dia lalana malalaka iray izay mipetraka eo afovoan-tanàna ary avy any avaratra ka hatrany atsimo mandritra ny iray kilaometatra sy sasany. Sehatra maitso tsara tarehy izy io ary eto amin'ny volana febroary dia ampiarahina ireo sary sokitra amin'ny lanezy ary eo koa ny Tilikambo fahitalavitra 150 metatra. Tonga eo amin'ny zaridaina ianao rehefa afaka folo minitra miala ny Station JR Sapporo. Ny fidirana amin'ny tilikambo dia mitentina 720 yen ary misokatra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 10 hariva.
Raha te hanana fahitana panoramic tsara kokoa na feno kokoa momba ilay tanàna, dia afaka mankany ianao Mount moiwa. Miakatra amin'ny lalan-kely ianao ary eo an-tampony dia misy lampihazo sy trano fisakafoanana. Mahafinaritra ny fomba fijery ary misy planeta sy teatra aza. Amin'ny ririnina dia misy koa foibe fanaovana ski kely.
Nilaza izahay tamin'ny voalohany fa i Sapporo sy ny manodidina azy dia paradisa ho an'ny tia natiora ka andro fitsidihana afaka mankafy azy tanteraka ianao: misy ny Resort ski Niseko, ny Rusutsu, ny Toeram-pandraisana mafana Noboribetsu ary ny an'i Jozankei sy ny farihy Shikotsu ary Toya. Ny perla amin'ny fahavaratra dia ny saha lavender any Furano, ranomasin'ny lilac, mavo, mavokely, mena sy maitso na aiza na aiza.
Ny drafitra mety dia ny mankany Tokyo, mijanona mandritra ny telo andro, ary avy eo maka fiaramanidina mankany Sapporo. Ny fiverenana any Tokyo dia mety amin'ny alàlan'ny fiaramanidina na lamasinina ihany koa, hankafy ny shinkansen amin'ireo toerana avaratra ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Sapporo, any amin'ny farany avaratry Japon
Fitsangatsanganana any Budapest, izay ho hita sy hatao II
Fitsangatsanganana any Budapest, inona no ho hita sy ataoko